NGABA UBOMI BOBOMI BONKE UKUBA YI-CHEERLEADER ESEKWE KWIBALI ELINYANISEKILEYO? - IINDABA
Ngaba Ubomi boBomi bonke ukuba yi-Cheerleader esekwe kwiBali eliNyanisekileyo?
Ubomi bonke buqondwa ngamabali ayinyani enzelwe umabonakude afana no'kutshata ekuboneni kokuqala. 'Kodwa ijelo linokuba sisihloko sosapho ngokwemihlali, kwaye umzekelo osebenzayo' Ukusweleka ukuze ube yi-Cheerleader . ’Into eqala njengelinge likaDarcy lokufuna ukubetha iqela lakhe elitsha labadlali abachwayitisayo lijika libe yimeko eyingozi xa kubulawa umntu asebenza naye, aze abekw’ ityala. Kule tekisi, sijonga ukuba ingaba le filimu ixhomekeke kumcimbi wobomi bokwenyani okanye hayi.
Ukusweleka kweCheerleader ephefumlelweyo kwiBali eliyinyani
UKirsten Costas, oneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala owayehlala kwidolophana encinci yaseCalifornia eOrinda, wagwazwa wabulawa ngugxa wakhe awayefunda naye uBernadette Protti, emva koko wongeza i-15, ngoJuni 23, 1984.
Zombini bezingamalungu okuqubha, nangona kunjalo, uCostas kuthiwa wayethandwa kakhulu kunoProtti, ngokusekwe kwi-Associated Press ngo-1984. Ingxabano ibixelwe ukuba yayisisizathu.
UProtti uyalele amapolisa ukuba wambulala ngenxa yokuba bendisoyika ukuba uzokwazisa abantu endandikade ndingummangaliso, ngokusekwe kwi-1985 Inqaku leLos Angeles Times . Kuthathe amapolisa iinyanga ezintandathu ukufumanisa ukuba uProtti ngumbulali. Emva kokuba oko kunikezelwa kwenziwe, wakhankanya, Ngaba kufuneka ndibuyele eMiramonte [kwisikolo samabanga aphakamileyo]? Andikwazi kuhlala kuyo ichongiwe. Ndingafa ngokufanelekileyo, isekwe kwi-CNN .
Wagwetywa ngo-1985 waze wagwetywa iminyaka esixhenxe engaphaya kwezitshixo.
intsholongwane ifake iiyure zekrisimesi
Ndilahlekile endaweni ye-cheerleader kwaye andizange ndibufumane ubulungu endibunqwenelayo kwaye andizange ndibufumane (kwincwadi) yonyaka (abasebenzi), uProtti wayalela unyanzeliso lommiselo kulo lonke uvumo olwenziweyo, olwathi lwenziwa kamva kulingo lokubulala kolutsha. Imiba endenze ndaphambana ngumonakalo kwaye andinakutshintsha… njengokuvela okanye imali okanye igama okanye imiba.
Eyona midlalo bhanyabhanya ilungileyo Isiqingatha sayo
Ukusweleka ukuze ube sisishwankathelo seCheerleader (Abaphangi ngaphambili)
Xa inenekazi elitsha kraca edolophini lizama ukuba ngabasebenzi besikolo samabanga aphakamileyo abachwayitisayo, ngokungazi ihlazisa elona nenekazi lithandwa kakhulu eklasini, okukhokelela kwizohlwayo ezibulalayo.
iiyure zikaMcDonald's new years eve
Emva kokubhubha kukamama ngaphambi kwexesha, u-Darcy wabetha kunye nomakazi wakhe osisityebi uCassandra ngesiqalo samva nje. Ngosuku lwakhe lokuqala, uDarcy ubukele i-varsity's cheer staff, AmaAmazons, alandela ekhokelwa nguTaylor kunye nomhlobo omkhulu kaTaylor, u-Epreli. Oku kulandelayo kuphelela kwimpikiswano eshushu ebangela ukuba omnye wabadlali abaninzi baphazamise iqatha lakhe.
Okwangoku, uDarcy unqwenela ukukhangela nangona emisiwe nguTaylor, ojika abe nomona emva kokubona uDarcy kunye nesoka lakhe eliqhula. Oku kuguquka kube yinto encinci yemicimbi yomntu wonke xa omnye wabadlali abaninzi bechwayita efunyenwe engenamsebenzi ngaphakathi kwindawo yokuzivocavoca i-gymnasium – kwaye uDarcy ubonakala ngathi nguye oza kuphendula. Kungekudala, iipranks ezibulalayo, i-blackmail, kunye nokubulala kuyaqala ukubandakanya iLocklear High, kwaye konke oku kukhokelela kwakhona eDarcy nakwiAmazons. UDomininique Booth, uKalen Bull, uAshlynn Yennie, inkwenkwezi kaNicolette Langley.
Isishwankathelo esineenkcukacha ngeeNgcinga
UDarcy uphoswa esiqwini semoto kwaye ubotshiwe. Usiwa kwikhaya eliyinkqantosi ngomnye umntu ochwayitisayo onetoti yepetroli kunye nehoodie yeAmazon.
UDarcy, i-baritone ene-unibrow, uqhankqalaza kunye noMakazi wakhe uCassandra emva kokusweleka kukanina etywaleni. Uyintokazi entsha kraca esikolweni kwaye ujonge ii-cheerleader ziyalandela. Iqela alinantlonelo kwelinye inenekazi kubasebenzi, uTracy. Uphula umlenze xa ukulandela kugqityiwe kwaye utyhola uMadison ngokumkhubekisa. UDarcy uthatha isigqibo sokujonga kwiqela lama-Amazons.
Sifumana i-tryout montage, kwaye umqeqeshi uPhillips ukhetha inenekazi elinye kuphela. U-Epreli no-Taylor baqhuba imiba kwiqela kwaye ngabo babonisa ukuba ngabasetyhini. Bajonge kwaye boyikiswa xa umqeqeshi uPhillips ethatha uDarcy. UTaylor woyikisa ngokwazisa ibhodi ye-varsity malunga noMqeqeshi uPhillips olala neNqununu ETSHATILEYO kwaye unyanzela umqeqeshi uPhillips ukuba akhethe uHolly njengenye indlela.
UDarcy kunye noTylor ungene ngqo kumzabalazo womzimba xa uTaylor ecinga ukuba uDarcy ubetha kwisoka lakhe. Bamele ukuvalelwa. UBrandon uyanengeka kukuziphatha kukaTaylor kwaye uqhawuka kunye naye. UMadison unika uDarcy ingcebiso; umxelela ukuba afike kwinkalo entle kaTaylor ukuba uyayazi into emnandi kuye. Kuyinyani ngenxa yesiphumo sikaMadison ngaphakathi kwigumbi lokutshixa ngokuhlamba ngokufanelekileyo emva.
U-kroy biermann akathethi nosapho lwakhe
UTaylor ulandelayo kuludwe lwe-hit, ngokucacileyo. Uvula ilokhari yakhe aze abethwe yibhaluni yepeyinti emfusa. Ubeka ityala kuDarcy, kwaye ke kungena omnye umzabalazo. UTaylor akanambeko kwaye uyindlavini. Utyhola i-Principal ngokuzama ukuziqeqesha.
Amaxesha oShishino lwaMazwe ngaMazwe
Umqeqeshi uPhillips ubonelela uDarcy kubasebenzi kwaye uyayihleka i-Taylor i-blackmail yenza inzame ngenxa yeNqununu efake uqhawulo mtshato. Umqeqeshi uxelela i-brat encinci ukuba akazukuba nayo nayiphi na imidlalo yevidiyo yamandla.
Kwilambu lekhandlela elibonakalayo likaMadison, uDarcy, kunye noTaylor ukwakheka kunye nokuhambelana nokusebenza ngemicimbi. U-Epreli uyabona kwaye ubonakala enomona okhethekileyo. Umntu weba idrone kwilokhi kaDarcy. Ngosuku olulandelayo idrone ibhabha nguTaylor ngelixa esebenza. Emva koko unkqonkqoza uBrandon kwibhodi yakhe yokutyibilika, aze uCassandra abize u-911. Bacinga ukuba uDarcy uza kuphendula kuhlaselo lwedrone ngenxa yengxelo yakhe yobundlobongela.
Emva kokuqhayisa okuqhwalelayo, uDarcy noTaylor baye babakhaba abasebenzi ukuze balwe. UDarcy uthetha nentanga yakhe uWarren kwaye ke bayamanga. Ucela ukuba baye kumhla kunye naye. Umhla sisitshixo esiphantsi kwaye uyadika. Umakazi uCassandra ubandakanyeke kakhulu kwindawo kaDarcy.
Ngeli xesha, u-Epreli uzama ukunceda uTaylor ukuba aphuhlise isicwangciso, nangona kunjalo, kuye kwafuneka ukuba anyangwe. Endaweni yoko, uphosa iifomsile zakhe kwigumbi kunye ne curls kwindawo yomntwana.
Umqeqeshi uPhillips ukrwitshiwe ezimotweni zakhe emva kokudibana neNqununu kwi-motel ecekeceke. Emva koko umbulali UBHODA iselfowuni yakhe?!?!??! Kulungile, Ubomi bonke, inokuba iyinto entsha.
Ulwazi malunga noMqeqeshi uPhillips likulwazi lwakusasa, kwaye umakazi uCassandra ubiza ukuba azi ukuba kuqhubeka ntoni ngoDarcy. Ubuza umtshana wakhe ngelixa ethwele itawuli entloko. Khange ndiyiqaphele indawo leyo ngenxa yoko ibingaqhelekanga kwaye iphazamisa. Haha.
UTaylor ubiza indibano evuyisayo kwaye ufuna abasebenzi babuye ngokudibeneyo kuMqeqeshi uPhillips. UDarcy ubaxelele ukuba uyishiya i-varsity kwaye uyabadinga kakuhle. U-Epreli uxelela uTaylor ukuba uza kukhathalela uDarcy. Emva koko uya kufumana umxholo wokubhaliweyo kumama wakhe ukuze amthathe.
UDarcy ubhalela u-Aunt uCassie ileta kwaye uyabaleka. Ngaphambi kokuba afike kude, ubanjiwe. Siphinde ekuqaleni kwefilimu. Umakazi uCassie ufumana ileta kunye nesutikheyisi kwaye uyazi ukuba inye into ebubuxoki. Uya kwi-varsity kwaye iintetho ziqubisana noTaylor. UTaylor uyaqonda ukuba u-Epreli wayethetha ukubulala uDarcy xa wayethetha, Khathalela uDarcy.
UTshazimpuzi uyathandeka malunga noTaylor. U-Epreli uyavuma ukubulala uMadison ngelixa elahla ipetroli kuyo yonke indawo. Umakazi uCassie utyhila kunye noTaylor kwaye uyongena ekhaya. Unuka ipetroli nangona kunjalo ubethwe ngaphakathi kwentloko ngesibane somlilo ngo-Epreli. UTaylor uyeka u-Epreli ekubulaleni uMakazi uCassie.
Amaxwebhu epizzagate kwi-netflix
U-Epreli ubambe u-Taylor kwimela yokujija kwaye uyavuma ukubulala wonke umntu ngenxa yemicimbi ekhankanyiweyo ngu-Taylor. U-Epreli uxelela uTaylor ukuba uyamthanda, nangona kunjalo kufuneka ambulale ngenxa yokuba esazi isixa esigqithisileyo. UDarcy uyazikhulula aze abethe u-Epreli entloko. Balwa emhlabeni kwaye u-Epreli wamhlaba ngekrele. U-Epreli uyafa kwaye uDarcy ufunyenwe emi ngaphezulu komzimba.
Kwinyanga enye kamva, uWarren wenza itheko kuDarcy. Uphezulu entla une-flashback engacacanga yokuphela kukamama wakhe? UTaylor uyema ngepati kwaye ke bayonwaba ngokudibeneyo.
Ngaba Ukufa ukuze ube yi-cheerleader kukwasekwe kwibali lokwenyani?
Hayi! Kukuphinda kwenziwe umboniso bhanyabhanya weklasikhi 'Umhlobo Wokufela' ukuba iinkwenkwezi uTori Spelling kwaye ujikeleze ngokubulala okwenyani kukaKirsten Costas, owahlatywa ngugxa wakhe owayenomona, uBernadette Protti.
Izigaba: Hulu Umqala Iindaba
i-anime man yobudala
isibhakabhaka esikhulu ngokuhlwanje
UFrank sinatra jr namhlanje ubonise
Uphawu luhambelana kunye ne-angie harmon
cj ipholile wiki
Ngaba i-imeyile ethunyelwe ngosuku lwe-columbus